Naannolee Oromiyaafi Tigiraay keessatti manneen seeraan alaa 2,400 ol diigaman - BBC News Afaan Oromoo
Naannolee Oromiyaafi Tigiraay keessatti manneen seeraan alaa 2,400 ol diigaman
Naannolee Oromiyaafi Tigiraay magaalota tokko tokko keessatti manneen seeraan ala ijaaraman jedhaman diigamuu aanga'oonni naannolee kanaa himan.
Bulchiinsi Godina Shawaa Bahaa manneen seeraan ala ijaaraman jedhe 2,000 caalu diiguusaa Itti-gaafatamaan Itti-aanaa Waajjira Bulchiinsaafi Itti-fayadamaa Lafaa godinichaa Obbo Mubaarek Usmaan BBCtti himaniiru.
Godinichatti keessumaa magaalaa Adaamaafi Mojoo, akkasumas naannawaa magaalota kanneeniitti bifa weeraraatiin ijaarsi seeraan alaa babal'achaa dhufe jedhu aanga'aan kun.
"Akkaataa qajeelfama manneen seeraan ala ijaaramanii ilaalchisee bahe (dambii 182) bu'uura godhachuun akka godina keenyaatti manneen seeraan ala bara 2005 ijaaraman guutumatti nidiigamu," jedhu Obbo Mubaarek.
Manneen seeraan alaa diiguu kuni yeroo Gannaa keessatti ta'uun namoota manni jalaa diigamu rakkoo hamaaf hin saaxiluu gaaffii jedhuufis Obbo Mubaarek,
"Manneen tibba kana magaalota Adaamaafi Moojootti diigaman kana garri caalaansaa weeraruma lafaatiif callisanii ijaaranii kan ta'an malee baayinaan namoonni kan keessa jiraachuu kan hin eegalledha," jedhan.
Manneen seeran ala ijaaramanii namoonni keessa jiraachuu eegalanis namoota kanneen mariisisuun diiguuf hojiin eegalameera jedhan.
Ijaarsa seeraan alaa diiguun kuni akka hin milkoofneef namoonni ajandaa siyaasaatti jijjiiruuf yaalan akka jiranis ibsaniiru aanga'aan kun.
Godinichatti manneen seeran ala ijaaraman 5,000 olitti tilmamamu kan jedhan Obbo Mubaarek, magaalonni Adaamaafi Moojoo ammoo haala yaaddessaan kan itti babal'atedha jedhu.
Naannawaa magaalaa Maqalee Aanaa Indartaa keessattis bammeen seeraan aladha jedhaman 400 doozariidhaan diigamuu isaanii jiraattonni ni dubbatu.
Aanaa Indartaatti bulchaan ganda 'Mahibara Gannat' Obbo Xihumaay Fitsuma dhimma kana ilaalchisee yeroo dubbatan manneen miseensota maatii 4-10 qabuufi bara 1990 irraa eegalee gandichi bulchaa ture seera qabaachuufi dhabuu isaa osoo adda hin baasiin manneen 420 ol ta'an akka diigaman taasifameera.
Akka namni kun jedhanitti manneen diigaman kun akeekkachiisa tokko maleedha.
Namoonni gocha kanaan hedduu haaranis gara waajira bulchiinsa pirezedaantii naannichaa deemuun mormii isaanii akka ibsata Xihumaay BBC'tti himaniiru.
Akka jiraattonni Indartaa jedhanitti bulchiinsa aanichaa humna addaafi poolisiin gargaaramuun ture tarkaanicha kan fedhatan.
Warreen manni jalaa diigame keessaa tokko tokko 'bakkeerra dunkaana buufatanii' akka jiran jiraattonni ni dubbatu.
"Namoonni naannoo Amaaraarraa buqqa'anii dhufan bakka jehame kanaa lafa bitatanii turan. Amma deebiyanii rakkoodhaaf saaxilamaniiru," jechuudhaan ibsaniiru.
Laga Xaafoo-Laga Daadhii: 'Dhimmi isaa namoota buqqisuu osoo hintaane, seera kabachiisuudha'